समुद्री पंप्स: प्रकार, वर्गीकरण, विशेषताहरु, उद्देश्य
जहाज निर्माण को इतिहास प्राचीन समयमा यसको जरा छ - यो पौडी सुविधाहरु को पहिलो उल्लेख पाँच अधिक हजार वर्ष पहिले थियो। त्यसपछि मानिसहरू नदी र oars द्वारा संचालित जहाज मा समुद्र मा सारियो। तब देखि, जहाज निर्माण एक विशाल सफलता प्रतिबद्ध छ, र आज औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रको देशको आर्थिक र राजनीतिक विकास मा एक अग्रणी स्थिति ओगटेको छ।
मिति, साधारण जो seagoing पोत अनुसार, शब्दावली स्वीकार - समुद्र माछा मार्ने, सामान वा यात्री परिवहन को परिवहन लागि डिजाइन एक ठूलो आकार पौडी सुविधाहरु। समुद्री जहाज - एक सैन्य पौडी सुविधाहरु। यी जहाज को प्रकार को कुनै पनि सामान्य कार्यका लागि सबै घटक र प्रणाली को एक विश्वसनीय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। पहिलो पाइपलाइन पोत मार्फत विभिन्न तरल पदार्थ को आन्दोलन सबै समय हुन्छ, किनभने समुद्री पंपों अधिकतम शोषण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
हामी किन पंपों जहाज चाहिन्छ?
पानी उठाने को लागि डिजाइन सुरुमा पम्प। यस धारण पानी पम्पिंग लागि जहाजको हाइड्रोलिक उपकरण को पहिलो मोडेल, एक मार्गदर्शन पिस्टन पम्प भयो। अब यसलाई व्यापक एक पंप-कार्य रूपमा चिनिन्छ। जहाज मा बाफ शक्ति बिरुवाहरु को परिचय बाफ ड्राइव संग पिस्टन पंप को उपस्थिति प्रदान।
अन्य हाइड्रोलिक तंत्र को, थप आधुनिक प्रकार, जहाज निर्माण इस्पात प्रविधिको विकास संग फैलियो। बिजुली मोटर्स को उद्भव द्वारा प्ले नयाँ पंपों को विकास मा एक विशाल भूमिका। आफ्नो कार्यान्वयन सञ्चालन उपकरण शरीर को परिक्रमा फ्रिक्वेन्सी मा वृद्धि प्रदान गरिएको छ, र शक्ति पंप।
आज, पंपों व्यापक अर्थव्यवस्था सबै क्षेत्रहरु मा प्रयोग गरिन्छ। कुनै अपवाद र जहाज निर्माण क्षेत्र छ। हाल, समुद्री जहाज निर्माण सक्रिय यस्तो उपकरणहरू को सबै अवस्थित प्रकार लागू हुन्छ।
एक पंप के हो?
पम्प - माथिल्लो गर्न तल्लो स्तर देखि तरल पदार्थ सार्नका लागि एक उपकरण। कहिलेकाहीं तरल पदार्थ को यो संयन्त्र ऊर्जा वा दबाब वृद्धि को एक निश्चित रकम दिनकै ओसारपसार। समुद्री पोत पंपों को आधारभूत प्रणाली लगभग सबैतिर प्रयोग गरिन्छ: शक्ति बिरुवाहरु, हाइड्रोलिक ड्राइव, चालक जीवन समर्थन प्रणाली, आदि को प्रणाली मा राखिएको ...
पंप को सञ्चालनको सिद्धान्त
ऊर्जा बदलन समुद्री इन्जिन को एक सार्दा तरल पदार्थ को पंप ऊर्जा, यी उपकरणहरू यो सही दिशा मा सार्न कारण (माथि चढ्नुहोस् वा सार्न तेर्सो एक बन्द सिस्टम भित्र निरन्तर चलिरहनु)। केही काम तरल पदार्थ को आवश्यक यातायात सिर्जना गर्ने, कुनै पनि मामला मा यस्तो हाइड्रोलिक उपकरणहरू पानी आपूर्ति वा जल शर्तहरूमा फिट अवधारणा जो को पम्पिंग प्रणाली, समावेश।
कुनै पनि पम्पिंग स्टेशन पोत को योजनाबद्ध रेखाचित्र
यो सर्किट मा ड्राइभिङ संयन्त्र रूपमा mains जोडिएको एउटा बिजुली मोटर प्रयोग गर्दछ। को काम तरल पदार्थ पूल को तल बाट आएको र माथिल्लो तह ऊर्जा रूपान्तरण कारण दबाब पाइप लाइन उत्प्रेरित गर्छ छ। को काम तरल पदार्थ पंप मार्फत पारित ऊर्जा सधैं पंप उपखाडी मा ऊर्जा भन्दा ठूलो छ।
दबाब पनि विद्यमान तरल आपूर्ति, उपकरण को शक्ति र दक्षता मा निर्भर गर्दछ। यसलाई पूर्व यसको निस्कनुहोस् पम्प गर्न प्रवेश बिन्दु देखि एक विशिष्ट ऊर्जा वृद्धि तरल पदार्थ विस्थापन प्रतिनिधित्व गर्दछ। मीटर मा व्यक्त, यो काम एजेन्ट को उठाने उचाइ वा आन्दोलन दूरी निर्धारण गर्छ।
को हाइड्रोलिक उपकरण को मुख्य विशेषताहरु
तरल इंजेक्शन प्रति एकाइ समय यसको मात्रा द्वारा विशेषता। इष्टतम पंप शक्ति आवश्यक दबाब उत्पन्न गर्न र पाइपलाइन मार्फत तरल पदार्थ प्रवाह समयमा व्यय घाटा सबै प्रकारका हटाउन आवश्यक छ। पम्प क्षमता, किलोवाट मा व्यक्त ड्राइव मोटर शक्ति र सम्पूर्ण पम्प स्टेशन को स्थापना क्षमता निर्धारण गर्छ।
को पम्पिंग स्टेशन को आधारभूत मापदण्डहरु परिवर्तन गर्दा पंप को दक्षता यसको प्रयोग को औचित्य निर्धारण गर्छ।
समुद्री पंपों कसरी विभाजन
बोर्ड मा स्थापित जहाज पंपों को सबै प्रकार यो मापदण्ड अनुसार वर्गीकृत छन्:
ड्राइव शाफ्ट (तेर्सो वा ठाडो) को स्थान अनुसार।
Actuator प्रकार (बिजुली, कल ड्राइभ वा घूमएर संयन्त्र ड्राइव)। पंप ड्राइव संयन्त्र ड्राइव शाफ्ट गर्न वा कमी गियर मार्फत प्रत्यक्ष मिलेर गर्न सकिन्छ। यो काम गर्न सक्छन् अडान-एक्लै वा गैर-स्वायत्त। स्ट्यान्डअलोन पंपों अन्य एकाइहरूको स्वतन्त्र संचालित गर्न सकिन्छ, र गैर-स्वायत्त (संलग्न deadlights) उनि सेवा संयन्त्र को काम हो।
दबाब (कम दबाव, उच्च दबाव वा srednenapornye) द्वारा उत्पादित बल गरेर।
अन्य उद्देश्यका लागि समुद्री पंप को एक वर्गीकरण पनि त्यहाँ छ। तिनीहरूले विशेष साझा जहाज वा केही घटक र पौडिरहेका गाडी वा जहाज पावर प्लान्ट को तंत्र सेवा गर्न अभिप्रेरित हुन सक्छ।
विशेष पंपों तरल कार्गो अवशेष को यातायात लागि, heeling मा पानी सार्न वा हालतमा पौडिरहेका ट्यांक ट्रिम वा कार्गो compartments तिनीहरूलाई हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर यी compartments को लुगा धुने उपकरणहरूमा तातो पानी आपूर्ति गर्न सक्छन्। उद्धार जहाजहरू एक शक्तिशाली bilge पम्प र आगो-लड जहाजहरु संग सुसज्जित हुन सक्छ - आगो एक विशाल प्रदर्शन पम्प।
यी तत्व को चिल्लो र कुशल कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ कि पोत मुख्य र सहायक नोड्स लैस प्रयोग पंपों। तिनीहरूले सामान्यतया मिसिन र बयलर compartments र शक्ति बिरुवाहरु सम्मिलित छन्। यी समावेश: ईंन्धन-पम्पिंग, इन्धन, तेल, पोसिलो, condensate, पानी र उपकरणहरू अन्य प्रकार।
समुद्री पंपों र आफ्नो विशेषताहरु
फलक, गियर, स्क्रू - सञ्चालन सिद्धान्त आधारमा सकारात्मक विस्थापन पंपों छन्। को पंप अपकेंद्र वा जेट हुन सक्छ। तिनीहरूले उद्देश्य र प्रयोगको प्रकार द्वारा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ गिट्टी पंप, bilge, पौष्टिक (को ठंडा सिस्टम पानी वा तेल आपूर्ति लागि प्रयोग), firefighters, दबाव र अरूलाई छन्। को volumetric पंप को सार छुट्टै आवधिक आपूर्ति गर्ने सङ्कुचन कोठामा मा चूषण कोठामा देखि हाइड्रोलिक तरल पदार्थ को मात्रा हो।
साधारण मात्रा हाइड्रोलिक तंत्र रोटरी-पिस्टन पंप मानिन्छ। घूमएर पंपों साधारण सामान्य जहाज प्रणाली, Hydraulically डेक उपकरणहरू र तंत्र, मुख्य इन्जिन र स्टीयरिंग सेवा मिसिन को सिस्टम मा प्रयोग गरिन्छ।
पम्प hydrodynamic कार्य उपकरणहरू छन्। मुख्य सञ्चालन शरीर जो एक घुमाउँदा पाङ्ग्रा त्यहाँ ब्लेड वा फलक हुन् जो। यो तरल आवश्यक ऊर्जा पारित र प्रवाह निर्देशन तिनीहरू छ। यी उपकरणहरू तरल पदार्थ को एक लगातार जेट स्ट्रिम, अर्थात् प्रदान गर्न, प्रवाह समान छ। काम तरल पदार्थ (पंप क्षमता) आपूर्ति मा प्ररित गर्नेवाला परिक्रमा को आकार र गति असर गर्छ। उच्च परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती मा प्ररित गर्नेवाला को ठूलो diameters उच्च प्रदर्शन हाइड्रोलिक संयन्त्र प्रदान गर्दछ।
पम्प लगातार trickle र यसैले एकरूपता आपूर्ति छन्। पंप को प्रदर्शन ठूलो को व्यास र प्ररित गर्नेवाला परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती, उच्च: फिड (throughput) पंप प्ररित गर्नेवाला र यसको आयाम को rotational आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ। अक्सर, अपकेंद्र पंपों तरल को प्रवाह वृद्धि गर्न प्रदर्शन multiwheel मा सञ्चालन।
को काम एजेन्ट निर्देशन फलक पंपों बताइरहेका द्वारा अपकेंद्र र axial (कहिलेकाहीं भनिन्छ प्रोपेलर) मा विभाजित छन्। यो पनि भंवर हाइड्रोलिक उपकरणहरू छ। अपकेंद्र र भंवर पम्प र चुच्चो अक्ष - यो काम तरल पदार्थ radially सारियो गर्न सकिँदैन र axial (प्रोपेलर) मा।
को जेट पम्प ऊर्जा काम तरल पदार्थ (तरल वा वाष्प) को धारा साथ सँगै आपूर्ति गरिएको छ। पंप को चुच्चो मा प्रवाह को ऊर्जा क्षमता गतिज ऊर्जा मा परिवर्तित छ। कारण चूषण कोठामा स्ट्रिम काम को उच्च गति प्रवाह गर्न, काम एजेन्ट नै भएको कोठामा बाहिर तरल वा ग्याँस entrains। मिश्रित प्रवाह एक विसारक मार्फत छुट्टी नाली मार्फत उत्प्रेरित गर्छ। एक उच्च वैक्यूम पंप सञ्चालनको ड्राई चूषण र सिर्जनाको क्षमता पानी प्रदान गर्न सक्छन्। तर, गैर-स्वायत्त र पंपों यस प्रकारको को कम दक्षता आफ्नो कमी हो।
हाइड्रोलिक तरल पदार्थ पम्पिंग, m लागि जेट पम्प। ई यसको दबाव वृद्धि गर्न, इंजेक्टर भनिन्छ। इंजेक्शन पंप अक्सर बाफ बिजुली सानो नली बृद्धि गर्न प्रयोग गरिन्छ। भनिन्छ injectors जेट पंप, को काम तरल पदार्थ को अवशोषण सुनिश्चित गर्न। तिनीहरूले कुनै पनि कोठा वा एकाइहरु देखि हावा वा condensate को हटाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोलिक उपकरण को एक धेरै साधारण प्रकार एक पंप गियर (NS) छ। को फिडर तत्व सिल आवास मा स्थित toothed पाङ्ग्रा एक जोडी छ। को पाङ्ग्रा सम्पर्क नभएका, दाँत घुमाउन, र तरल को मात्रा मा वृद्धि सिर्जना सुरु गर्दा तल्लो उपखाडी मार्फत चूसा छ। ब्याच मात्रा आगमन तरल पदार्थ बिस्तारै पाङ्ग्रा बीच अन्तरिक्ष मा जम्मा र आफ्नो बाह्य पक्ष गर्न थिचिएको छन्। को काम एजेन्ट सङ्कुचन कोठामा बग्छ र चुच्चो outputting विस्तार भएकोले। जहाज यस प्रकारको यस्तो तेल वा इन्धन रूपमा राम्रो स्नेहन विशेषताहरु संग viscous तरल पदार्थ पम्पिंग प्रयोग पंपों।
जहाज पनि मात्रा आबद्ध मा भाड पम्प। काम तत्व को संख्या मा निर्भर गर्दछ, एक पंप छ भेद one-, two-, three- वा mnogovintovye यन्त्र।
जब ड्राइभिङ सापट घुमाउँदा स्क्रू को परिक्रमा गर्ने चूषण पाइप बाट प्रवेश गर्ने काम तरल पदार्थ को mezhvintovoe ठाउँ प्रवेश जसमा एक जटिल गति कार्य गर्दछ। दुवै काम एजेन्ट मा एक निश्चित कोण मा स्क्रू घुमाउँदा पनि स्क्रू कोठामा बन्द। काम स्क्रू दबाब लाइन मा तरल पदार्थ काम को पम्पिंग गर्न जान्छ। तरल पदार्थ धेरै उन्नति गराउँछ, र त्यहाँ सङ्कुचन कोठामा मा दबाव मा वृद्धि छ भने खोल्छ एक विशेष सुरक्षा वाल्व - अतिरिक्त तरल पदार्थ फिर्ता उपखाडी कोठामा गर्न रिसेट छ।
तरल काम को लगातार आपूर्ति आधारमा ठाडो अपकेंद्र पंप पोत को सञ्चालन सिद्धान्त। यो काम शरीर एक घुमाउँदा ड्राइभमा सापट अडिएको विशेष ब्लेड संग एक पंप रोटर छ। एक विद्युत मोटर द्वारा संचालित। सञ्चालन मा, अपकेंद्र पंप ड्राइव ऊर्जा तरल घुमाउँदा ब्लेड हस्तान्तरण। जब यो चाहेको दबाव तिनीहरूलाई द्वारा सिर्जना गरिएको छ, कार्य अन्तर्गत आउटलेट गर्न उपखाडी देखि काम एजेन्ट को आन्दोलन द्वारा जो प्रदान गरिएको छ।
ठाडो multistage अपकेंद्र पंपों सबै शक्ति बिरुवाहरु मा लगभग सार्वभौमिक प्रयोग गरिन्छ। आवश्यकता उच्च दबाव वातावरण सिर्जना गर्न कहाँ multistage पंपों जहाज लागि प्रयोग गरिन्छ। यस्तो उपकरणहरू को सञ्चालनको सिद्धान्त तरल, एकल चरणमा आवश्यक दबाव पुगेको अर्को चरण, जहाँ यसको दबाव फेरि वृद्धि छ outputting गर्न पाइप मार्फत बग्छ छ भन्ने छ।
क्षमता निर्भर भएको पंपों फरक डिजाइन हुन सक्छ। विशाल शक्ति इंजेक्टर पंप, ठूलो टैंकरों प्रति घण्टा तरल को टन को दसौं हजार क्रम पुग्न सक्दैन।
पोत मा पंप को उद्देश्य
जहाज मा पंपों, पानी समुद्र पंप वा विभिन्न आधारभूत प्रणाली पौडी हालतमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, यी जस्तै सामान्य जहाज प्रणाली, हो:
जहाँ पंपों विभिन्न प्रकारका प्रयोग गरिन्छ प्रमुख सिस्टम पौडी मतलब छ,
आगो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक पोत बोर्ड मा जहाजको आगो पंप हुनुपर्छ। सामान्यतया, यी एकाइहरु संकुचित र हल्का छन्। प्रभावकारी आगो प्रतिक्रिया र छिटो केन्द्र पत्ता लगाउन, पंप चाँडै सुरु हुनुपर्छ। यो आगो पंप आवश्यक दबाव प्रदान गर्न र पानी एक शक्तिशाली जेट प्रदान गर्न प्रवाह गर्नुपर्छ जब।
भरने को मामला मा समुद्र लागू समुद्री bilge पंप संग धारण। माछा मार्ने वा परिवहन पोत सुरक्षा नियमहरु अनुसार कम्तिमा दुई bilge पंपों हुनुपर्छ। त्यहाँ तीन यस्तो यात्री जहाज लागि आवश्यक पंपों छन्। र तिनीहरूलाई एक मात्र खर्च नगरेर हुनुपर्छ, र अन्य दुई अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले समग्र सुकाउने सिस्टम समावेश हुनुपर्छ।
वार्मिंग वा ठंडा प्रणाली ताप लागि आवश्यक वा वातावरण जहाज प्रतिष्ठानहरु काम को तापमान lowering। उदाहरणका लागि, आन्तरिक दहन इन्जिन गर्न इन्धन आपूर्ति अघि आवश्यक सफा र गर्मी छ। तर स्नेहन तेल पर्छ, conversely, सुन्दर। काम तरल पदार्थ को आन्दोलन विशेष पंप द्वारा सुनिश्चित छ।
को चालक दल को एक आरामदायक रहन सेनेटरी पोत सिस्टम आवश्यक छ सुनिश्चित गर्न। यस्तो प्रणाली को प्रभाव सेनेटरी पंपों प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई प्रयोग शौचालय पानी को पानी आपूर्ति वा चूषण पिउने हुन्छ।
को गिट्टी सिस्टम खर्च नगरेर र पानी समुद्र पोत को गिट्टी ट्यांक भर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ।
ट्रक: विनिर्देशों। ट्रक सार्वभौमिक
ठूलो बिरुवाहरु पर्म
उत्पादन - यो .. उत्पादन। समाप्त सामान
अमेरिकी जासूस विमान: विवरण र फोटो
लुइस Bunuel: Filmography र जीवनी
Grinders - सही छनौट!
कोमल ऋण र यसको मूल्य। म कसरी प्राप्त गर्छन्?
एक सेट रूपमा लिनक्स टंकशाला: चरण निर्देशनहरूको, सुविधा र समीक्षा द्वारा चरण
किन म Chichikov मृत प्राण किनेको? कानून मा घटना को सबै दोष
Ovulation को समयमा आवंटन धेरै बताउँछ।